Umfazi weLeps u-Anna Shaplykova, ubomi bomntu, abantwana, i-biography, ifoto. Umfazi wokuqala kaGregory Leps Dubinskaya
Umculi owaziwayo, ukukhubeka ebomini kuphela, unokuze akhohlwe ngonaphakade ngokubonakaliswa nokuthanda uthando. Ewe, lo mgaqo ngesizathu esithile awusebenzi kumculi waseRashiya eneengcambu zeGeorgia - iGrigory Leps. Wayexhamla kwizidakamizwa, wayedla ngokungenasiphelo kwiglasi yakhe yentlungu kunye novuyo, wanciphisa imali yezinto ezithandabuzayo, ukutshisa ubomi, kodwa abaphulaphuli babemthanda. Nangona "izono zobutsha" umenzi ngezwi lokuqhayisa unobomi obuhle. Umfazi weLeps ngumfazi osisigulane nesilumkokazi owaziyo ukuxolela, ukuphulaphula, ukuthanda nokuphefumlela.
UGrigory Leps kunye nomkakhe uAnna Shaplykova
Umfazi wokuqala weLeps, uSvetlana Dubinskaya: obushushu obushushu, ukuphikisana nokubamba ...
Ukukhanya okubuthathaka kwakuyindlovukazi yangempela yeSochi Music College, apho isisombululo sikazwelonke seGrigory Leps safundiswa. Ngomfundi othobekileyo, abafana babethandana ngaphandle kokujonga emva, kwaye iqhawe lamaphupha alo "ngumphefumlo wenkampani" uGrisha. I-Sveta ethandekayo yayingumntu obalaseleyo ngenxa yobuchule bakhe obuchukumisayo-wayethetha ngeengcali zeentsimbi kwaye wayinqoba iintliziyo zamantombazana ngokwenza amakhono. Uthando lomfundi lweentliziyo ezimbini zothando zazigcwele ububele kunye nomoya. Amaqabane ngendlela enomusa enomona. Abalingana nabo, bebukele "ibali lomthando" esikolweni, baqikelele utshintsho oluzayo kwi-biography yeLeps.
Umfazi wokuqala kaGrigory Leps, uSvetlana Dubinskaya
Emva kokuba athole idiploma, uGrigory waya emkhosini. Emva kokufudumala, iLeps yanquma ukuthatha inyathelo elibalulekileyo ebomini - inikwe uSvetlana Dubinskaya isandla kunye nentliziyo. Intsapho yeLeps yathatha umfazi opheka ngokutsha. Abazali abaqinileyo baloo nto bahlala befumana iimpazamo ekukhethweni kwakhe, bachaze iimpazamo kwintombazana. Phakathi kwezihlobo zaqala ukuhlaselwa. Umtshato onobungozi awuzange ugcine ukubonakala komntwana kwintsapho - intombi ka-Inga.
Umfazi wokuqala kaGrigory Lepsa Svetlana Dubinskaya nentombi yakhe i-Inga
Ngeli xesha uGrigory waba ngumculi wevenkile odumile. Intsapho, umfazi, abantwana be-Leps baye bahlala kwimvelaphi - kwindawo yokuqala kwimisebenzi ephambili yezobugcisa bezobugcisa beempumelelo kunye nempumelelo yomvuzo. Umfazi wokuqala we-Leps, eyintombazana ekhukhumelekileyo neyinqabileyo, ngolunye usuku wathabatha indodakazi yakhe-kwaye washiya ngonaphakade. Umfazi kaSvetlana wayenokubandezeleka ngenxa yephulo lobudlelwane. Uzuko lwafika kumculi.
Grigory Leps kwisigaba
Intsapho entsha enomdla kaGrigory Leps: umfazi, abantwana, isithombe esivela kwingqolowa yomntu
Emva kokuqhawula umtshato wakhe kumfazi wokuqala, uSvetlana, impilo kaLieps ayizange ihlale ixesha elide. Umculi waphula iintliziyo ukuba abalandeli bawabethe, ngelixa behlala bengenakufumaneka kwaye babanda. Umfazi wesibini u-Anna Shaplykov Leps wadibana kwelinye lamacala. Umculi ulungele ukubonana nekamva lokuphila ngobunzima be nightclub. Umsindo, utywala, abahlobo beenkwenkwezi - kwaye akukho mvakalelo yokubambisana okukhulu. Kwaza kwangoko wabonakala kwinqanaba - ibhola elihle kakhulu elimnandi. Intombazana eyenziwa ngokubunjwa kweBalama Vaikule ballet. I-Grigory Leps yaqwalasela umfazi owamkelekileyo "kubadansi" kwaye ngokukhawuleza, ngaphandle kwesithunzi sokungathandabuzeki, watshela abahlobo bakhe: "Ndiza kutshata nale nto!" Inkampani evuyayo yathatha amazwi e-bachelor eqinisekisayo njengentloni. Kwaye akukho nxaxheba kwale mcimbi akanakukucinga ukuba kwisigaba esifanayo kunye neVaikule ngumfazi wexesha elizayo le-Leps.
UAna Shaplykova kunye nabantwana bakaEva, uNicole no-Ivan
Ku-ballerina ekhangayo kuloo busuku obunomdla, umculi onobunzima akazange alinde. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, iLeps yabona kwakhona uhlanga olungileyo. Intlanganiso engeyiyo-random yenzeke ngesikhumbuzo somyeni wakhe uLaima. Ngelo xesha umculi akazange anqikaze-waya kuAna waza wabuza ngqo ebunzini: "Ngaba uya kuba ngumfazi wam?" UShaplykova wayengenalolo suku. Umdaniso wayenomntu othembekileyo ixesha elide, kwaye ngokutsho kweLeps, ngokungafani namakhulu amabhinqa, wayengenangqondo. Kwiphakamiso sodumo oludumiweyo, loo mfazi waphendula ngombuzo othi: "Ngaba unemvume yokuhlala eMoscow?" Impendulo yesigqirha esichukumisayo ibeka iLeps ukuba imiswe.
Grigory Leps no-Anna Shaplykova
Umfazi weLeps u-Anna Shaplykova: "Kufuneka ube ngumntu ongeyena udidekile ukuba ubaleke kumfazi onjalo!"
UGrigory Leps wanyamekela umfazi wakhe ozayo uAnne ngokugqithiseleyo - wabonisa ingcamango kunye nezinto ezimangalisayo. I-ballerina ayizange igijime ukukhawuleza kwiingalo zenkwenkwezi, kodwa loo ndoda yayinyamezela. Ekugqibeleni, intliziyo ka-Anna yachithwa - inkwenkwe yangaphambili yafumana isango elivela esangweni. UShaplykova wathuthela kwiLeps. Emva kokuzalwa kwentombi kaEva, lo mbhangqwana wasungula ubuhlobo kwiofisi yokubhalisa. Ngenxa yobomi bentsapho obungenasiphelo, i-ballerina ene talente yashiya umsebenzi wayo kwaye, ngaphandle kokwesaba ukutshatyalaliswa komfanekiso wayo, wazala abanye abantwana ababini. Umfazi weLeps wakwazi ukufumana lula ulwimi olufanayo nentombi yendoda yakhe kumtshato wakhe wokuqala. U-Inga wenza abahlobo kunye noodadewabo.
Amantombazana aseGrigory Leps - Inga no-Eva - ngokufowunelwa kwiprojekthi yomculo "Golos"
Intloko yentsapho ihlala iphela kwindlela yokutyelela, ingabikho nzame, ithola imali. U-Anna ubandakanyeka ekukhulisweni kwenzala nemisebenzi yasekhaya. Umfazi ozilumkileyo akayi kumkhalimela umyeni wakhe ngokunikela ixesha elincinci kwintsapho, uxinzelelo lukhulula iziphuzo ezinxilisayo kunye nokuhlamba kwiinkwenkwezi. "Kufuneka ube ngumntu ongeyena ukuba ubaleke kumfazi onjalo!" - utsho iLeps, ephefumlelwe uthando.
Intshisekelo yemfihlo kaGregory Leps yintsapho yakhe
Intsapho yeGrigory Leps: "Ndiyonwabile, njengakho!"
Intsapho enkulu yeLeps kwisithombe ibukeka ilunobunye kwaye ibumbene. Ubomi obudibeneyo bomntu obumbayo buye beqhubeka iminyaka engaphezu kwe-15. Amaqhosha athatha ukuphefumlelwa ukusuka "kwintsimi yeentyatyambo" yangoku. Umculi unentombi ezintathu ezithandekayo-Inga, uEva noNicole. Umfazi ozithandayo wamnika uGrigory enye unyana ka-Ivan.
Uneminyaka engakanani umfazi weLeps?
Abafaki besi sibini esidumileyo bahlala benomdla kwiminyaka emininzi umfazi omncinane weLeps. Ubumnandi obuncinane buka-1972, umama kathathu umama, kodwa, ngokucacileyo, uthando olukhulu alumvumeli ukuba alume kwaye lubune. Umahluko phakathi kweminyaka kunye noGrigory yiminyaka eyi-10.
Abantwana bakaGregory Leps, ifoto
Abantwana bomculi ukususela kwiminyaka yobudala babonisa ubuchule, bakhula kwaye banomdla. Abazali, nangona bephila kakuhle, abafuni ukuba abantwana babo babe "ngabadlali" kunye nabadlali. Abantwana abathandekayo bafumana izipho kuphela kwiimeko ezizodwa. Ngoku intsapho ihlala kwindlu enkulu yelizwe. Iintombi zaseLepsa ngeentsuku zeveki kufuneka zivuke ngo-6 ekuseni ukuze zibambe isifundo sokuqala esikolweni. Unina onomdla wabantwana abaninzi ulandelelana ngokucwangcisiweyo ucebiso lobuncwane bakhe, kwaye umyeni wakhe uhlalise umgangatho wokusebenza ongagunyazisiweyo. U-Anna akakuboni ukuba kuyimfuneko ukuba "aphinde afundise" iqabane lomntu kunye nokumnciphisa ithuba lokuthatha inxaxheba yobomi obuthandayo. Ngoku i-Grigory Leps iyanelisekile ngobomi bakhe bodwa malunga neepesenti ezilikhulu.
Grigory Leps kunye nosapho lwakhe
Umculi, naphezu kwemikhwa yakhe eyingozi, wakwazi ukunqoba ngaphezu kwesinye isigidimi ebomini bakhe. Njengabo bonke abantu abanomdla omnye, amaphupha abaculi abasebenza ngaphantsi, abafumana ngaphezulu kunoko ngoku. Ukumhlonela umfazi kunye nabantwana kwisithombeni seLepsu sinobuhle, kodwa ukufumana ulonwabo olupheleleyo alaneleyo. Umntu osisidlangalaleni ufuna ukufumana ngokuphindaphindiweyo kunye nabantu abasondeleyo, ukulibala ixesha elithile malunga neekonti kunye nama-albhamu. Umculi ulungele ukuhlangabezana nemingeni emitsha kunye namaphupha, kunye nomfazi othembekileyo we-Leps, njengangaphambili, uyavuya ukuxhasa isiqingatha sesibini kuzo zonke iinjongo.
U-Irina Pegova: isimo somtshato
I-modest Aglaya Shilovskaya: i-biography, ubomi bobuqu kunye nezithombe ezigqityiweyo kwisimo se Playboy
Ukukhanya okungekho nto, kodwa akukho sizathu!
Ukuqinisekiswa kokutsala amadoda
Indlela yokujongana nokuguga ngoncedo lokubunjwa ubuso
Ziyintoni ukukhangela imichiza? Impendulo ebusweni buso
Yintoni enokukuxelela ngombala weenwele zakho?
Ibali leenganekwane. Indlela yokubeka umculo odlawayo "uCinderella": ukususela kwi-premiere
I-nut ye-Pine: iimpawu zonyango
Indlela yokukhetha ibhatyi yefestile 2013?
Isiqalo esihle kumhla
I-sweet cherry jam
Isonka nge rosemary nobusi
Isobho seentlanzi - Intloko
I-recipe ye-mullet phantsi kwe-mayonnaise